Kukhalwa ngokubulawa kwabantu eMbali | News24
Kukhalwa ngokubulawa kwabantu eMbali
ISITHOMBE: sithunyelweKungesikhathi uNgqongqoshe uMnu Mxolisi Kaunda ekhuluma namalunga omphakathi eMbali ngoLwesihlanu.
UKUBULAWA kwabantu kanye nokudunwa kwezimoto ibona bugebengu obuhamba phambikli endaweni yaseMbali.
Lokhu kuvezwe uNgqongqoshe wezokuPhepha koMphakathi esifundzazweni saKwaZulu-Natal uMnu Mxolisi Kaunda ngesikhathi enomhlangano namalunga omphakathi aseMbali ngoLwesihlanu mhla zingama-21 kuNhlangulana (June) ehholo laseMbali Unit 1.
Uthe esikhathini esingangengezinyanga ezintathu sekubulawe abantu abane eMbali, ilandelwa iDambuza ne-Edendale ngabathathu, KwaPata, Peaceville, Ashdown, Mbutshane kanye naseWillowfontein ngababili.
“ Kumele siyiqede leyonto yokuthi kubulawe abantu abangenzanga lutho.Umbhedo lowo kumele siyiqede leyonto.
“Ngiyafisa ukuthi umphakathi waseMbali nawo uphile izimpilo ezifana nezabanye abantu ezingenabo ubugebengu obusezingeni elikhulu kangaka. Lobu bugebengu obusixakile la kulo mphakathi benziwa izingane zethu. Angeke kuze kusuke umuntu wakude azokwenza ubugebengu la. Uma ngabe benziwa omunye umuntu lowomuntu kusuke kukhona omunye amaziyo khona eMbali nokunguyena omunikeza ulwazi ngokwenzekayo,” kubeka yena.
Unxuse amalunga omphakathi ukuthi uma ngabe kukhona izigebengu abahlala nazo endlini bazidedele manje bazinikele emaphoyiseni ngoba sekuyisikhathi sokuthi kuliwe nobugebengu.
“Kumele sibambisaneni ukulwa nobugebengu ngoba niyabazi abantu abenza ubugebengu. Niyabezwa ngesikhathi besaxoxa behlela ukwenza ubugebengu. Kubalulekile ukuthi sibanqande ngaphambi kokuba babenze lobo bugebengu,” kubeka yena.
Uthe ufuna ukuthi kusetshenziswe amahholo emiphakathi ukuqeqesha abantu besifazane ukuze kuzogwemeka ukuba
“Sihlanganile-ke namaphoyisa sadingida ukuthi sizolwa kanjani nobugebengu. Sizobuya ngenyanga kaNcwaba (August) ngalesosikhathi sifuna ukuthi sibe sesizwa ngani selinjani izinga lobugebengu.
“Sifuna ukuthi nibe namakomidi emigwaqo okuyibona abazoqapha sonke isimo ngoba nonke niyazama nonke njengomakhelwane. Kumele nazane nonke ukuze nizokwazi ukubona isigebengu uma ngabe kufika isigebengu endaweni.”
Umphakathi uphindwe wanikezwa inombolo ka-WhatsApp lapho bezobika khona ubugebengu. Uma ngabe kukhona ubugebengu ofisa ukububika : 063 697 9569. Le nombolo isebenza ku-WhatsApp kuphela.
Amalunga omphakathi nawo azwakalise izinkinga abhekene nazo endaweni yaseMbali . Elinye Ilunga lo mphakathi lithe banenkinga yokugqekezelwa belele ebusuku.
“Siyalubika udaba emaphoyiseni kodwa kungaboshwa muntu. Kwesinye isikhathi size sicabange ngisho ukuzithathela umthetho ngezandla kodwa ngemuva kwenkulumo kangqongqoshe sesinethemba lokuthi kuzoba khona ushintsho. Asisalali ilezi zigebengu ezingamaphara,” kubeka yena.
Umphakathi uphinde wanxusa ukuthi kuvulwe isiteshi samaphoyisa esiseMbali Unit 2 kungangcini njengokuthi kwenziwe izincwadi ezifungelwe.
Ungqongqoshe uvakashela kule ndawo nje ezinyangeni ezimbili ezedlule amaphoyisa asesiteshini i-Plessislaer abemashele kulendawo nalapho kade ezoqwashisa khona ngobugebengu.Kanti emasontweni amabili edlule kusanda kutholakala izimoto ezishisiwe eMbali.